टीपी-लिंक राउटर कन्फिगर गर्दै (300M ताररहित एन राउटर TL-WR841N / TL-WR841ND) - नेटवर्क र इन्टरनेट - 2019
टीपी-लिंक राउटर कन्फिगर गर्दै (300M ताररहित एन राउटर TL-WR841N / TL-WR841ND)
गृह Wi-Fi राउटर सेटअप गर्ने आजको नियमित लेखमा, म TP-Link (300M वायरलेस एन रूटर TL-WR841N / TL-WR841ND) मा बस्न चाहन्छु।
धेरै टाढाका प्रश्नहरू TP-link routers मा सोधिएका छन्, तथापि सामान्यमा, कन्फिगरेसन यस प्रकारका अन्य मार्गमा धेरै फरक देखि फरक छैन। र त्यसोभए, इन्टरनेट र स्थानीय वाइफाइ सञ्जालका लागि काम गर्न आवश्यक पर्ने चरणहरूमा हेरौं।
1. राउटर जडान गर्दै: विशेषताहरू
2. राउटर सेट अप गर्नुहोस्
2.1। इन्टरनेट कन्फिगर गर्नुहोस् (PPPoE टाइप गर्नुहोस्)
2.2। हामीले एक ताररहित वाइफाइ सञ्जाल सेट अप गर्यौँ
2.3। Wi-Fi नेटवर्कको लागि पासवर्ड सक्षम गर्नुहोस्
राउटरको पछाडि धेरै धेरै टाढा छन्, हामी सबैभन्दा बढी ल्यान 1-LAN4 मा रुचि राख्दछौं (तिनीहरू तल चित्रमा पहेंलो) र इन्टरनेट / वान (निलो)।
त्यसोभए, केबलको प्रयोग गर्दै (तल चित्र, सेतो हेर्नुहोस्), हामी राउटरको LAN आउटपुट मध्ये एक कम्प्युटरको कम्प्युटर कार्डमा जोड्छौं। इन्टरनेट प्रदायकको केबल जडान गर्नुहोस् जुन तपाइँको अपार्टमेन्टको प्रवेशबाट आउछ, यसलाई WAN आउटलेटमा जडान गर्नुहोस्।
वास्तवमा सबै कुरा। हो, यन्त्रमा परिणत भएपछि, तपाईले एलईडीको झिझकलाई ध्यान दिनुपर्दछ, स्थानीय सञ्जालमा कम्प्युटरमा देखा पर्न नसक्ने स्थानीय सञ्जाल (हामीले अझै कन्फिगर गरिएको छैन)।
अब चाहिन्छ सेटिंग्स प्रविष्ट गर्नुहोस् राउटर। यो गर्नका लागि, कुनै पनि ब्राउजरमा, ठेगाना पट्टी टाइप गर्नुहोस्: 192.168.1.1।
त्यसपछि पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् र लग इन गर्नुहोस्: व्यवस्थापक। सामान्य रूपमा, दोहोर्याउनु हुँदैन, यहाँ राउटरको सेटिङ कसरी प्रविष्ट गर्ने बारे विस्तृत विवरण हो, जसको तरिकाले, सबै सामान्य प्रश्नहरू त्यहाँ ध्वस्त छन्।
हाम्रो उदाहरणमा, हामी PPPoE जडान प्रकार प्रयोग गर्दछौँ। तपाई कुन छनौट गर्नुहुन्छ भने, तपाइँको प्रदायकमा निर्भर गर्दछ, लगइनहरू र पासवर्डहरू, जडान प्रकारहरू, आईपी, डीएनएस आदि जस्ता सबै जानकारी अनुबंधमा हुनुपर्छ। यो सूचना हामी अब र सेटिङहरूमा लिन्छौं।
बाँया स्तम्भमा, नेटवर्क सेक्शन, WAN ट्याब चयन गर्नुहोस्। यहाँ तीन मुख्य बुँदाहरू छन्:
1) वान जडान प्रकार - जडानको प्रकार निर्दिष्ट गर्नुहोस्। बाट यो नेटवर्कमा जडान गर्न कुन डाटामा प्रविष्टि गर्न आवश्यक पर्दछ। हाम्रो अवस्थामा, पीपीपीओई / रूस पीपीपीओई।
2) प्रयोगकर्ता नाम, पासवर्ड - PPPoE मार्फत इन्टरनेटमा पहुँच गर्न लगइन र पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
3) जडान स्वचालित रूपमा मोड सेट गर्नुहोस् - यसले तपाईंको राउटरलाई स्वचालित रूपमा इन्टरनेटमा जडान गर्न अनुमति दिन्छ। त्यहाँ मोडहरू र म्यानुअल जडानहरू छन् (असुविधाजनक)।
वास्तवमा सबै कुरा, इन्टरनेट सेट अप गरिएको छ, बचत बटन थिच्नुहोस्।
ताररहित वाइफाइ सञ्जाल सेटअप गर्न, ताररहित सेटिङ् सेक्समा जानुहोस्, त्यसपछि वायरलेस सेटिङ ट्याब खोल्नुहोस्।
यहाँ यो पनि तीन कुञ्जी मापदण्डहरू तान्नु आवश्यक छ:
1) SSID तपाईंको ताररहित नेटवर्कको नाम हो। तपाईं कुनै पनि नाम प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले सजिलै संग खोज्नु हुनेछ। पूर्वनिर्धारित रूपमा, "tp-link", तपाइँ यसलाई छोड्न सक्नुहुनेछ।
2) क्षेत्र - रूस चयन गर्नुहोस् (राम्ररी, वा आफ्नै, यदि कसैले कुनै रूस पढ्दैन भने)। यो सेटिङ् सबै मार्गमा फेला परेन, बाटोबाट।
3) विण्डोको निचोटि भागमा बक्समा जाँच गर्नुहोस्, विपरीत सक्षम रूटर राटर रेडियो, SSID प्रसारण सक्षम पार्नुहोस् (यसरी तपाइँले Wi-Fi सञ्जाल अपरेसन सक्षम पार्नुभयो)।
तपाइँ सेटिङहरू सुरक्षित गर्नुहुन्छ, Wi-Fi सञ्जालले काम सुरु गर्नुपर्छ। वैसे, म उनको पासवर्ड को रक्षा गर्न को अनुशंसा गर्छु। यो तलको बारेमा।
पासवर्डको साथ तपाईंको Wi-Fi नेटवर्कको रक्षा गर्न, वायरलेस सुरक्षा ट्याबको वायरलेस सेक्शनमा जानुहोस्।
पृष्ठको धेरै तलमा त्यहाँ मोड WPA-PSK / WPA2-PSK चयन गर्ने सम्भव छ - यो चयन गर्नुहोस्। र त्यसपछि पासवर्ड (पीएसके पासवर्ड) प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाइँले तपाइँको ताररहित सञ्जालसँग जोडेर प्रत्येक पटक प्रयोग गरिने छ।
त्यसपछि सेटिङहरू बचत गर्नुहोस् र राउटर रिबुट गर्नुहोस् (तपाईले 10-20 सेकेन्डको लागि मात्र बन्द बन्द गर्न सक्नुहुनेछ।)।
यो महत्त्वपूर्ण छ! केहि आईएसपीहरू तपाईंको नेटवर्क कार्डको म्याक ठेगानाहरू दर्ता गर्नुहोस्। यस प्रकार, यदि तपाईं आफ्नो म्याक ठेगाना परिवर्तन गर्नुहुन्छ - इन्टरनेट तपाईं उपलब्ध छैन। जब तपाईं सञ्जाल कार्ड परिवर्तन गर्नुहुन्छ वा राउटर स्थापना गर्नुहुन्छ - तपाईले यो ठेगाना परिवर्तन गर्नुभयो। त्यहाँ दुई तरिकाहरू छन्:
पहिलो - तपाईं म्याकको ठेगाना क्लोन गर्नुहुन्छ (म यहाँ दोहोरिने छैन, सबै लेखमा वर्णनमा वर्णन गरिएको छ; TP-Link सँग क्लोनिंगको लागि विशेष खण्ड छ: सञ्जाल-> म्याक क्लोन);
दोस्रो - तपाईंको नयाँ म्याक ठेगाना प्रदायकसँग दर्ता गर्नुहोस् (सम्भवतः त्यहाँ प्राविधिक सहयोगको लागि पर्याप्त फोन कल हुनेछ)।
त्यो सबै छ। शुभकामना!
सञ्जालमा सीडी-रोम कसरी साझा गर्ने (स्थानीय सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूको लागि साझा पहुँच बनाउन को लागी)
पूर्ण रूपमा AVG एंटीवायरस कम्प्युटरबाट हटाउनुहोस्
अटोटोमा घोषणा अपडेट गर्नुहोस्
मोनेटाइजेशन खोल्नुहोस् र YouTube भिडियोबाट लाभ बनाउनुहोस्
Yandex ब्राउजरमा जडानफाइल त्रुटिमा समाधान गर्ने तरिका
कम्प्युटरमा काम गर्दा एउटा त्रुटि हो जुन विन्डोज7को प्रयोगकर्ताहरूले सामना गर्न सक्दछ AppHangB1। आउनुहोस् यसको कारणहरू पत्ता लगाउनुहोस् र उन्मूलनको तरिकाहरू बुझ्नुहोस्। यो पनि हेर्नुहोस्: विन्डोज7मा त्रुटि "कसरी तयारी" गर्नुहोस् उन्मूलन अनुप्रयोगहरूको कारणहरू र तरिकाहरू HangB1 एउटा त्रुटि AppHangB1 जब भिडियो कार्ड ड्राइभरले अपरेटिङ सिस्टमसँग अन्तरक्रिया गर्दा विवादको कारण हो। थप पढ्नुहोस्
माइक्रोसफ्ट एक्सेल हेडर बिल्डिंग